बागलुङ, १८ वैशाख। एक महिनाको अवधिमा बागलुङमा ठूलो पुरस्कार राशिका तीन फुटबल प्रतियोगिता भए । पहिलो– बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय ‘मेयरकप फुटबल प्रतियोगिता’, दोस्रो– स्ववियु धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको ‘अन्तर कलेज फुटबल प्रतियोगिता’ र तेस्रो– युवा तथा खेलकूद विकास समितिद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता । ‘मेयरकप’ हालसम्मकै ठूलो पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता थियो जसका […]
Posted in खेल,मनोरञ्जन Read More »
को को हुन् बलिउडमा गुमनाम पहिलो पाइला ?
सञ्जय दत्त, आलिया भट्ट, अजय देवगण र करण जौहरजस्ता बलिउड सुपरस्टारबारे सबैलाई थाहा छ । उनीहरूलाई मनपर्नेदेखि मन नपर्ने कुराबारे पनि धेरथोर चर्चा हुने गर्छ । तर, यी कलाकारको पहिलो फिल्मबारे थाहा नहुन सक्छ । बलिउडमा पाइला राख्न त्यति सहज छैन । कि त आफन्त या खानदान त्यस क्षेत्रमा हुुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिरकालाई त्यति सजिलो […]
काठमाडौं, २५ फागुन । आजबाट नेपाली कथानक चलचित्र मंगलम आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ । छवीराज ओझाको लगानीमा बनेको चलचित्रमा नवल नेपालको निर्देशन रहेको छ भने शिल्पा पोखरेलको मुख्य भुमिका रहेको छ । पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आउँला भन्ने चर्चित गितसहितको यस चलचित्र देशभरका हलहरुमा प्रदर्शनमा आएकोले राम्रो बजार लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
धेरै माया नदेउ फेरी विछोड हुनपर्ला भन्दै आइन विष्णु माझी (भिडियो)
काठमाडौं, २८ माघ । धेरै माया नदेउ फेरी विछोड हनुपर्ला भन्दै गायीक विष्णु माझीले एक म्युजिक भिडियो सार्वजनीक गरेकी छिन् । गायिका विष्णु माझीको लोक गीत ‘मुना मदन सार्वजनिक भएको हो । उनलाई सिरिस देवकोटा र गुलाव गिरीले साथ दिएका छन् । जीवन गिरी र गुलावको शब्द रहेको गीतमा जीवनले संगीत भरेका छन् । म्यूजिक […]
Posted in Videos,मनोरञ्जन,मल्टिमिडिया,मुख्य समाचार Read More »
हरेक पुरुषले महिलाबाट चाहने मुख्य ६ चिज के के हुन ?
काठमाडौं, १९ माघ । पुरुष र महिलाको सम्वन्ध अत्यन्तै गाढा र मधुर हुन्छ । पुरुष र महिलको सम्वन्ध राम्रो र नराम्रो हुनुले घर र समाजकै प्रगति र उन्नतीमा विकास र वाधा उत्पन्न हुन्छ । पुरुषले महिलाबाट र महिलाले पुरुषबाट के चाहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न गाह्रो हुन्छ । तर पनि हरेक पुरुषले महिलाबाट के […]
Posted in मनोरञ्जन,मुख्य समाचार,समाज Read More »
सम्झनाको साथमा तिलकले ल्याए पानी खानु मुलको, विहे गर्नु कुलको…(भिडियो)
काठमाडौं । लोक दोहोरी म्युजिक भिडियोहरुको भिडमा ओखलढुंगाका कलाकार तिलक सुनुवारले एउटा चर्चित म्युजिक भिडियो लिएर आएका छन् । चर्चीत गायीका सम्झना लामीछाने मगरको साथमा गायक सुनुवारले पानी ‘खानु मुलको विहे गर्नु कुलको’ बोलमा आकर्षक म्युजिक भिडियो पस्केका हुन् । ओखलढुंगा जिल्लाको खिजी देम्बा गाउँपालिकाको प्रतिभावान कलाकार तिलक सुनुवारको यो समसामयीक कोसेली संकलन संगीत प्रालिले […]
पोखरामा सेक्सी गायीका भन्दै ज्योति मगरलाई यस्तो गरियो (भिडियो)
पोखरा, १० माघ । पछिल्लो समयमा अस्लिल गीत र तथा नृत्य पर्दशन गर्दै आएको आरोप खेपीरहेकी लोक गायिका ज्योती मगरलाई पोखरामा हुन लागेको एक महोत्सवमा भने आउट नै गरिएको छ । कास्कीमा आयोजना हुने भनिएको प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेलामा गायिका ज्योति मगरलाई बोलाउनु पर्ने प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै आयोजकले समाजमा विकृति फैलाउने गायिकालाई मेलामा नल्याउने घोषणा […]
काठमाडौं, ८ माघ । नेपालका कतिपय लोकप्रिय कलाकारले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन् भने कतिपय नायिकाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका छन् । अन्तर्जातीय र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने धेरैजसो नायिकाले प्रेमविवाह गरेका हुन् । नेपालमा बनेको पहिलो रंगीन चलचित्र कुमारीकी नायिका चैत्य देवी सिंह, नायिका सारंगा श्रेष्ठ, मनको बाँधकी नायिका सुष्मा शाही, नायिका मीना सिंह, नायिका […]
बलिउडकी चर्चित अभिनेतृ प्रियंकालाई सडकमा एक युवकले चुम्बन खाइदिएपछि….
माघ । बलिउडकी चर्चित अभिनेतृ प्रियंका चोपडालाइ भारतका सडमा हिँडिरहेको बेला एक युवकले चुम्बन खाइदिएको तस्विर अहिले भाइरल बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा फिँजीएको उक्त तस्विरमा एक युवाले प्रियंकालार्य बीच सडकमै चुम्बन गरेका छन् । प्रियंकालाई कसले र किन चुम्बन गर्‍यो रु यसको पछाडिको अर्थ सामान्य छ । यो सुटिङको एउटा दृश्य हो । हलिउड सिरियल […]